Global Voices teny Malagasy » Azerbaijan : Miverina amin’ilay famonoana nitranga tao amin’ny Ivontoeran’ny Solitany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Jolay 2018 5:59 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika (fr) i Ivan, imanoela fifaliana
Sokajy: Azerbaijan, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tanora
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka ny 13 May 2009)
Tena ela fiparitahana [tao Azerbaijan] ny vaovao mikasika ilay loza nitranga tao Bakou  tamin'ny faran'ny volana lasa teo, izay nampitolagaga izao tontolo izao, ary roa herinandro taty aoriana, fanontaniana maro no mbola tsy misy valiny. Na izany aza, azo antoka fa tamin'ny marainan'ny 30 aprily 2009, olona 13 no maty nandritra ny fitifirana nahafaty tao amin'ny Ivontoeran'ny solintany azery (Azerbaidjan State Oil Academy ).
Miaraka amin'ny fandrakofana tao an-toerana toy ny tsy hisy mikasika ity loza ity, tsy nahavita nahazo ny zava-nitranga  ny olona maro, toy ny mpanoratra ny blaogy 27 month in Azerbaïdjan [amin'ny teny anglisy toy ireo rohy rehetra voatanisa].
Nisy fifampitifirana tao amin'ny oniversiten'i Bakou androany. Naheno zavatra iray aho, izay toa tsy mampino : niditra tao amin'ilay toeram-pianarana ny Zeorziana iray avy amin'ny foko azerbaijan ary nanomboka nitifitra olona nandritra ny fiakarany ny tohotohotra nialohan'ny nanatodihany ilay basy tany aminy. Naheno tsaho aho fa olona 50 no maty ary lehilahy nitam-piadiana telo, fa tsy mbola haiko foana hoe hatraiza no tokony hinoako izany.”
Tsy nahavita nandrakotra ny loza nitranga raha tsy ora maro taorian'ireo haino aman-jery iraisam-pirenena, araka ny voamariky  ny blaogy “Jessica P. Hayden is off the map”.
[…]raha toa ka nitranga ilay fitifirana, ary nihazakazaka nankeny an-toerana ny polisy, mbola nanohy ny fandefasana ireo tafatafa am-pahitalavitra fandefany rehefa mitatao vononana foana ireo fahitalavitra (eritrereto ny fandaharan'i Oprah na i Ellen miaraka aminà tetibola kely fotsiny). Tsy nisy fanapaharana ho an'ny vaovao tselatra. Tsy nisy vaovao mikasika ny fivoaran'ilay loza mahatsiravina. Nohamarinin'ny vehivavy izay niresahako fa teny amin'ny sehatra firesahana an'aterineto no nahazoany vaovao tsaratsara kokoa noho ny an'ireo loharanom-baovao ofisialy.
Naka lahatsarin'ireo zava-nitranga mahatsiravina tamin'ny alalan'ny findainy ny mpianatra sasany teo am-panaisorana azy ireo hiala teny an-toerana.
Herinandro iray taorian'ireo loza nitranga ireo, tsaroan'ny blaogeran'ny Flying Carpets and Broken Pipelines ny fomba nahitany ilay vaovao :
Ny 30 aprily, any Instambol ao, mandeha miasa, toy ny andro rehetra ihany, miposaka ihany ny masoandro nony farany. Fa niova ny zavatra rehetra rehefa tonga any amin'ny biraoko aho, manontany ahy ny mpiara-miasa amiko raha toa ka naheno ny zavatra nitranga tany amin'ny oniversite iray tao Bakou aho […]. Velomiko ny solosainako ary manamarina ilay vaovao: mpianatra 22 no maty (13 no isa tena izy araha ireo vaovao taty aoriana, somary taratara kely tamin'ity androany ity) tao anatina fitifirana mahatsiravina tao amin'ny invotoeran'ny solitany ao azerbaijan. Ny dona no tonga voalohany, ary avy eo nandimby azy ny alahelo narahan'ny hatezerana.
Manamarina matetika ireo vaovao ireo isaky ny 15 minitra aho, tsy misy fanampiny, mitovy foana , x maty, x maratra. Manamarina ao amin'ny kaonty Facebook-ko aho, feno ilay vaovao na aiza na aiza, nampakatra ireo isa farany avokoa ny namako rehetra.
Fa tsy mbola misy vaovao marim-pototra mikasika ireo nahavanon-doza, ny anton'ilay fitifirana sy ny tantara tena izy. […]
Manainga  ny fanontaniana izay apetraky ny olona maro ao Bakou amin'izao fotoana izao ny iray amin'ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices, i Ali S.Novruzov teo am-panoratana ho an'ny tranonkala Frontline Club, toy ny ataon'ny blaogy Side-Talks Azerbaijian : 
Raha toa ka miara-ory amin'ireo fianakaviana very havana isika, tsara ny manasongadina fanontaniana vitsivitsy. Mety ho na iza na iza izany, fa maninona no tsy misy vaovao mikasika ny zavatra tena nitranga? Fa maninona no mbola tsy misy antony foana nanaovana ireo famonoana ireo? Iza no voarohirohy amin'izany? Ary hatraiza no nahitan'ny fanadihadiana ireo «heverina» ho mpiray tetika ?
Mandritra izany fotoana izany, mamaritra ny dona nahazo ny mponina rehetra tamin'io andro io ny blaogera Sheki, Azerbaïdjan , ary manoratra fa ho tsarovan'ny  rehetra mandritra ny taona maro ity loza nitranga ity.
Indrisy, hijanona ho ilay andro nahalasanan'ny zanany ho any amin'ny oniversite mba tsy hiverenany any an-trano intsony ny 30 aprily 2009 ao anatin'ny fahatsiarovan'ny fianakaviana maro ao Azerbaijan . Ankehitriny, olona faharafakeliny 13 no novonoin'ireo mpitifitra tao amin'ny Invontoeran'ny solintany azerbaijani tao Bakou, ary olona maro no maratra mafy. Tsy mbola fantatra hoe naninona, fa tsy hamelona indray ireo maty tsy nanan-tsiny ireo ny antony, na inona na inona ( (Allah rəhmət eləsin – ho ao amin'ireo niharam-boina rehetra anie ny fiadanana).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/31/123590/
 Bakou : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bakou
 Azerbaidjan State Oil Academy: http://www.adna.baku.az/
 tsy nahavita nahazo ny zava-nitranga: http://northwestjeff.wordpress.com/2009/04/30/shooting-in-baku/
 nahitany ilay vaovao: http://flyingcarpetsandbrokenpipelines.blogspot.com/2009/05/tragedy.html
 Side-Talks Azerbaijian : http://nickymedia.blogspot.com/2009/05/lessons-to-be-learnt-from-shooting-at.html
 ho tsarovan'ny: http://shekiazerbaijan.blogspot.com/2009/04/last-day-of-april-2009.html